Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop qaybtii 3aad | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 3aad)
Antonio L. Carter | | Design Graphic, General, Photoshop, Tababarada
Qeybtii hore ee tan tutorial, Waxaan aragnay sida aan u isticmaali karno isku dhafka u dhexeeya laba qalab oo awood badan oo ah Adobe PhotoshopSidee yihiin Burush iyo Qalin, si aad u bilowdid inaad ku dhufatid sawirada qalinkeena helitaanka natiijo xirfad leh. Tan waxaan u adeegsanay mid ka mid ah xulashooyinka qalabka Calool, taas oo u oggolaaneysa qeexida waddo calaamadeysan oo dhowr fursadood oo kala duwan ah, midkoodna inuu ku sameeyo a Caday kahor.
Waa muhiim in la ogaado sida loo maareeyo aaladaha PhotoshopWaxay kuxirantahay howsha aan nafteenna u dhiibnay. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo qaadashada iyo midabaynta sawirrada, aaladaha wax lagu sawiro iyo baafinta ayaa lagama maarmaan u ah qaadashada, iyo qalabka kala qaadista, buuxinta, iyo xulashada ayaa lagama maarmaan u ah soo bandhigida midabka sawirka. Aan raacno tutorial de Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (Qaybta 3aad).
Isaga oo sii wadaya meeshii aanu ku dhaafnay qaybtii hore, Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 2aad), waxaan u isticmaali doonnaa qeyb ka mid ah farsamada la bartay si aan u sawirno sawirkayaga si tartiib tartiib ah iyo dulqaad, anagoo raadineyno inaan dhigno khadadka halka ugu badan ee aan ka helno natiijada ka soo baxdana waxay u egtahay sida ugu macquulsan, dhamaadka maalinta waa hadafka casharkaan.
Waxaan xasuustaa sida waagii hore majaajilooyinka, jaantusku uu u ahaa sida carqalad ku ah kartoonistaha, kaasoo ka qaadan jiray dhammaan amaahda dadweynaha, taas oo aan garanaynin muhiimada ay leedahay in lagu shubo shaqada ugu dambeysa. In kasta oo ay run tahay inay jireen shaqaaliin awood u leh inay baabi'iyaan shaqada ninka wax qoraya ee ugu fiican (tusaalaha ugu fiican ee aan ka helnay horaantii 90-meeyadii Al Milgron, taasi waxay baabi'isay kartooniste kasta oo taabtay taxanaha yaabina) sidoo kale waxaan ka hadli karnaa dadka sida Paul neary (taas oo kor u qaadeysa shaqooyinka farshaxanno heer ilaah ah sida Bryan Hitch ama Alan Davis, kaas oo kan dambe looga baahan yahay qandaraas shaqadiisa) ama Mike de carlo (farshaxanle majaajillo ah tan iyo dhammaadkii 70-meeyadii, oo qalinka ku duugay inta badan taxanaha Majaajillada DC, isagoo ku sameynaya shakhsiyad iyo qaab ka dhigtay qaabkiisa inuu la xiriiro sawirka madbacadda).
Hadda tiknoolajiyada hadda jirta waxay u oggolaaneysaa nooc ka mid ah inkin badan oo la jaan qaadaya sawirka naqshadeeyaha, iyada oo luminaysa nooca uu sameeyay qofka ku dhex jira, taas oo marar badan wanaagsan oo mid kalena loola jeedo luminta tayada sawirka. Taasi waa sababta barashada khadadka iyo midabaynta sawiradeena ay muhiim u tahay, maadaama aan si buuxda u maamuli doonno shaqadeena isla markaana aan sidoo kale awood u yeelan doonno inaan ka qaybgalno mashaariicda dadka kale. Aan sii wadno tutorial halka aan uga tagnay.
1 Qeexida Burushka
Markaad qaadanaysid waxaad ogaan doontaa in dhumucda burushku aysan ahayn tan ugu habboon meelaha badan, tusaale ahaan halka xariiqda sawirku uu ballaadhay. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa in burushyada qaarkood ay ku siinayaan dhammeystir halka kuwa kalena ay gebi ahaanba ka duwan yihiin. Si loo helo gacan ku haynta aaladda, waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso burushyada aad ugu jeceshahay ka dibna aad keydiso kuwa aad ugu jeceshahay. Waxaan kaaga tagi doonaa feyl la soo dejisan karo oo leh noocyo kala duwan oo burush ah iyo waxyaabo kale.
Burushka iyo dhumucda aad uga tagtay xulashada ayaa noqon doonta midka ku habboon Photoshop wadada aad soo martay, markaa waa inaad si fiican u doorataa ka hor intaadan mid ama midka kale dooran. Xirmooyinka burushyada ee aad ka heli doontid faylka la soo dejisan karo dhamaadka safkan Casharrada Waxaad ka heli doontaa 3 nooc oo burush ah oo aan ku sameeyay soo galitaanka sawirkan, mid leh darafyadiisa toosan, mid khafiif ah oo ku yaal talooyinka iyo dhumucda bartamaha iyo kan ugu dambeeya oo leh talooyin cilladaysan. Burushyadan kaladuwan waxay noqon doonaan kuwa aan u baahanahay inaan awoodno khad sawirkeena. Kuwa aan u baahanahay midabayn Mar dambe ayaan faallo ka bixin doonaa.
Marka aan bilowno khad adoo adeegsanaya qalabka Burush iyo Qalin, waxaan ka heli doonnaa dhowr waxyaalood oo gaar ah marka la eego siyaabaha loola shaqeeyo qaababka iyo burushyada kala geddisan, oo intooda badani la jaan qaadi karaan qaabkeenna shaqo.
Isticmaalka burushyo kala duwan ayaa had iyo jeer lagu qeexi doonaa qaabka joomatari ee aan sawireyno. Burushka Khad khafiif ah Waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay xawaashka sawirkaaga adoo ku dhejinaya gooladaha iyo qaababka wareegsan. Burushka Khad toosan Aad ayey faa'iido u leedahay in la helo qeexitaanka iyo goorta aan dooneyno in xariiqdu le'eg tahay dhinacyada oo dhan, tusaale ahaan si loo sawiro walxaha geesoolaha. Burush Khad khadhaadh Waxaan u adeegsan doonnaa qaab hal abuur leh, oo ku guuleysaneyna dhammeystirka iyo foomamka burburay.
Wixii ku dhammaaday burush Khad khafiif ah, Waxaan hoos u dhigi doonnaa qiimaha cabbirka burushka illaa kala badh midna laga jarayo, had iyo jeerna aan isku soo wada uruurinno, sidaas awgeedna aan awood u leenahay inaan khadadkaas ku hoggaaminno dhammaadka dhumucda la doonayo
Qalabka Calool way fududahay in la shaqeeyo haddii aad khibrad u leedahay sawir dulinka, waxayna siisaa xakameyn fara badan istaroogga la sameynayo. Haddii aan rabno gacan qabsi kaliya waa inaan dejino dhibic oo aan u wareejinno jiirka si aan u helno, si la mid ah haddii aan dooneyno dhibic taagan, waa inaan gujinnaa oo keliya adigoon dhaqaajin jiirka. Hawlwadeenadu waxay naga caawin doonaan inaanu hagno khadadka wadada ilaa meesha aan aadka u jecel nahay. Waxaan sidoo kale wax ka qaban karnaa qadka, annaga oo ka tagnaana warqadda oo la riixo Ctrl oo markaa helitaanka qalab loogu talagalay tafatirka wadada.
In xiga tutorial waan dhammeyn doonnaa sawirka oo waxaan bilaabi doonnaa la shaqeynta xulashada kanaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 3aad)
Bilaash buug-yare ballaaran oo sawirro buugga guridda ah
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 2aad)